HIM | Health in Myanmar » 2010 » May
Myanmar Interfaith Network on AIDS
The moderator would be happy to post any information on this network if it is sent to [him].
The tough life of "Dr Vix"
Author: HimBur | Category: English3 comments
Poor Dr Vix having to go toaconference that many of us would have liked to attend. Anyone want to share the documents?
အရေးတယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောကြပါ
ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကို အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရန်ပုံငွေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကလေးငယ်တွေ အတွက် ဦးစားပေးဖို့ ဒီနေရာကနေ တိုက်တွန်းပေးကြပါ။ +++ မော်ဒရေတာ +++
HIV သတင်းအချက်အလက်လေး သိချင်လို့ပါ - ၃
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&Ano comments
ကျနော် စပြီးမှားခဲ့တာ အခု ၂ နှစ် ဝန်းကျင်လောက် ရှိပြီ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ သံသယရှိလို့ ဆေးစစ်ခဲ့တာ ဘာရောဂါမှ မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု အဲဒီရောဂါ လက္ခဏာနဲ့ တူတဲ့ ပုံစံမျိုးနေတွေ ဖြစ်နေသလားလို့ ခံစားရတယ်။ သံသယဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ။
HIV/ AIDS နှင့် ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှု ရနိုင်သော နေရာများ - ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရန်ကုန်ဝန်းကျင် နေရာများရှိ HIV/ AIDS နှင့် ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ – စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး စုစည်းထုတ်ပြန်ချက် ဖြစ်သည်။
Teen Magazine – Positive Pages မှ မိုးထက်စံရဲ့ “လောကမှာ အသက်တိုခြင်းဟာ အပြစ် မဟုတ်သလို၊ ရောဂါထူခြင်း ဟာလည်း အပြစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ မွေးဖွားပြီးချိန်ကနေ သေဆုံးချိန်အထိ ခဏလေးသော နှစ်အကန့် အသတ် လေးမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ မေတ္တာပြည့်ပြည့် နေသွားနိုင်ဖို့သာ အဓိကပါ။ တစ်နေ့ သေမင်းက လာခေါ်ခဲ့ပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ အကြောက်ကန် ငြင်းငြင်း နောက်ဆုံး ပါသွားရမှာချင်း အတူတူ လူတွေက ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ရွံ့ရှာရပါသနည်း။”
အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါပညာပေး ဇာတ်ကား၌ ကျန်ဇီယီ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်
အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါအတွက် ပညာပေးဇာတ်ကား၌ ကျန်ဇီယီပါဝင် သရုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
HIV သတင်းအချက်အလက်လေး သိချင်လို့ပါ - ၂
မိတ်ဆွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာဝန်ကောင်းများနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် လမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါတယ် ကျွန်တော်က အားကစားလုပ်ရတာ ၀ါသနာလည်းပါ ပါတယ်။ အခု အားဆေးတွေပဲ သောက်နေပါတယ်….။ ပိုးထိန်းဆေးကိုလည်း မသောက်ချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမျိုးသမီး ကလည်း နားလည်ပေးပါတယ် ပြီးတော့ ကူညီဖေးမပေးပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လိင်အလုပ်သမ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
The Plight – Issue No.3/2009, September 2009 မှ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လိင်အလုပ်သမ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြပါသည်။
What do young Catholic volunteers teach about HIV?
One wonders what they will be teaching about HIV.
Full presentation on Australian involvement in the HIV response in Myanmar
The [him] moderator postedaslide about Australian involvement in the HIV response in Myanmar. He received the following email. … The [him] moderator has posted the link to the entire presentation so that the slide can be seen in context. Here is the link for the entire presentation.
HIV ဖြစ်နေသူများ အသက်ရှည်ရန် ကူညီခြင်း
အသက် ၅၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ “ချိုဗွန်(Chov Von)” ဟာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ (Kampong Thom) နယ်၊ စံတော့ခ် (Santok) မြို့မှာ သူ့သမီးနဲ့အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ သူမဟာ မိသားစုမှာ တဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ပြီး အဆိုတော် တယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခမာ(Khmer) ရိုးရာသီချင်းတွေကို ခံပွန်တွမ်း(Kampong Thom) နယ်မှာ သူမ သီဆိုဖျော်ဖြေလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး သားသမီးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။